Ahoana ny fomba handehanana amin'ny JPG mankany amin'ny Word: safidy hafa hanovana ny endrika | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba handehanana amin'ny JPG mankany amin'ny Word
Fantatry ny matihanina amin'ny famolavolana fa indraindray izy ireo dia mila "milalao" amin'ny endrika. Izahay dia miresaka momba ny famindrana antontan-taratasy amin'ny sary, jpg amin'ny teny, sary mankany amin'ny pdf ... ary hino izany na tsia, misy fotoana mety hiatrehanao fisalasalana, na tsy fantatrao hoe iza no safidy tsara indrindra hanovana endrika iray ho lasa endrika hafa.
Noho izany, amin'ity fotoana ity, raha toa ka mila mandeha avy amin'ny JPG mankany amin'ny Word ny zavatra ilainao, hanampy anao izahay amin'ny alàlan'ny fanolorana anao ny fampahalalana ilainao fa koa ireo programa izay azonao ovaina mora foana, na manam-pahalalana ianao na tsia.
1 Inona no atao hoe JPG
2 Inona no atao hoe Teny
3 Fandaharam-potoana handehanana manomboka amin'ny JPG mankany amin'ny Word
3.1 Avadiho amin'ny Internet ny rakitra JPG
3.2 Mandehana amin'ny JPG mankany amin'ny Word miaraka amin'ireo programa
3.2.1 JPG mankany amin'ny teny miaraka amin'ny sary
3.2.2 Sintomy ireo programa hamonjy JPG amin'ny Word
Inona no atao hoe JPG
Ny endrika JPG dia fanitarana sary, izany hoe, sary izay ho azonao amin'ny solosainao eo ambanin'ny famaranana -.jpg. Ny anarana feno dia Joint Photographic Experts Groups, noho izany dia fantatra ihany koa amin'ny hoe JPEG.
Ity endrika ity Mampiavaka azy ny famoretana ireo sary ampy ka tsy milanja firy (mba hahafahana mampakatra na misintona azy ao anatin'ny segondra) fa tsy misy io famatrarana io dia midika fa ho very kalitao ilay sary. Raha ny marina dia tsy, na dia miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana sy ny fandikana ary ny fisintomana an'io sary io aza dia hisy fatiantoka kely kokoa ho tsikaritra.
Amin'izao fotoana izao, JPG dia iray amin'ireo malaza amin'ny Internet. Saika ny sary rehetra no mampiasa azy satria io dia endrika tsy dia mavesatra loatra ary mety tsara amin'ny tranonkala sy tranonkala rehetra. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia very ny tany satria mandeha tsara ny endrika mifantoka amin'ny tranonkala vaovao Webp. Na dia mbola tsy ekena aza ary ny rakitra webp dia mbola tsy azo ampiasaina amin'ny toerana rehetra.
Inona no atao hoe Teny
Tena, Word dia programa. Microsoft Word no ampiasainay, ny programa an-tsoratra izay tafiditra ao amin'ny Microsoft Office. Noho io antony io dia fantatra amin'ny anarana hoe Office Word na hoe Microsoft Word. Hatramin'ny 1983 dia tao amin'ny solosaintsika io, na dia misy safidy hafa maimaimpoana maro hafa aza (ankehitriny, ireo klônina).
Noho izany, ny tena hataontsika rehefa manova ny JPG ho Word dia ny mampita izany amin'ny rakitra an-tsoratra, mazàna miaraka amin'ny fanitarana doc na docx.
Ity antontan-taratasy ity dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra indrindra amin'ny fanoratana lahatsoratra, na dia azo atao aza ny mampiditra sary na koa mamorona antontan-taratasy sy sary misy endrika sasany (noho izany ny fampiasana azy).
Ankehitriny, tokony ho fantatrao fa rehefa miala amin'ny JPG mankany amin'ny Word ianao dia tsy avy amin'ny JPG mankany amin'ny endrika Word akory no alehanao, fa kosa mankany amin'ny extension doc (io no mahazatra indrindra). Ary io Word io ve no anaran'ilay programa, fa tsy ilay rakitra mihitsy. Ny kisary izay miseho amin'ity karazana antontan-taratasy ity dia mamaritra fa nosokafana niaraka tamin'ny Word ity antontan-taratasy ity (na miaraka amin'ireo solony, toa ny OpenOffice, LibreOffice ...).
Fandaharam-potoana handehanana manomboka amin'ny JPG mankany amin'ny Word
Alao an-tsaina hoe manana sary ianao. Izy io dia mety misy sary, fanoharana, ary koa lahatsoratra. Ary mila manova azy ianao ary mampiasa izay rehetra ao anatiny. Saingy tsy manana ny tany am-boalohany ianao ary tsy manana fomba hanovana jpg. Noho io antony io dia maro no misafidy ny hitady fomba hanovana azy io ho zavatra azon'izy ireo ovaina, toy ny rakitra Word. Te hahafantatra izay safidy hafa tokony hanovana ny JPG ho teny ve ianao? Miresaka momba azy ireo isika.
Avadiho amin'ny Internet ny rakitra JPG
Iray amin'ireo safidy voalohany, indrindra raha mampiasa ny motera fikarohana ianao hamahana ny olana mahazo anao dia ireo pejy an-tserasera izay manampy anao hanao io fiovam-po io.
Ity dia iray amin'ireo fomba mora indrindra sy haingana indrindra hanaovana izany, izay manana tombony fa tsy ilaina ny misintona zavatra amin'ny solosaina ary tsy mila mametraka na inona na inona ianao. Mazava ho azy, misy fatiantoka ihany koa ny fampidiranao ny vaovao izay mety tsy miankina amin'ny tranonkala, ary tsy voafehinao ny zavatra hataon'izy ireo amin'ny zavatra ampakarinao. Noho io antony io dia maro no aleony tsy miraharaha an'io takelaka io.
Fa raha tsy mampaninona anao izany dia afaka mampiasa pejy hafa tsy misy olana ianao. Ankoatr'izay, ny fomba fiasan'izy ireo dia tsotra:
Ampidiro ny sary JPG tianao hovaina.
Omeo hiova izy ary miandry minitra vitsy. Ny sasany izay ataon'izy ireo dia mampita izany mivantana amin'ny PDF ary avy eo mankany Doc.
Sintomy ny kinova Doc efa niova fo.
Ny ankamaroan'ny pejy dia manome anao fampahalalana momba ny fomba itondrany ireo rakitra apetrakao, noho izany tsy hevitra ratsy izany, alohan'ny hanovana zavatra "manokana" na "zava-dehibe", maka minitra vitsy hijerena ny politikany.
Ary pejy inona no azonao ampiasaina? Manoro hevitra anao izahay:
Mandehana amin'ny JPG mankany amin'ny Word miaraka amin'ireo programa
Safidy iray hafa tokony hamindranao ny JPG amin'ny Word ny alalàn'ny programa napetraka ao amin'ny solosainao. Amin'ity tranga ity, misy safidy isan-karazany azonao ampiasaina, ny sasany izay tsy mila misintona sy mametraka na inona na inona akory.
JPG mankany amin'ny teny miaraka amin'ny sary
Raha manana Windows 10 ianao, dia azo antoka fa manana safidy "Photos" ao amin'ny menioo ianao. Io ilay rindranasa ampiasain'ny rafitra hahafahanao mahita ny sary ao amin'ny solosainao, fa koa ireo izay ampakarinao avy amin'ny findainao, takelaka sns. Eny, amin'ity no ahafahanao mamadika rakitra rakitra ho lasa lahatsoratra.
Inona no tsy maintsy ataonao? Ny zavatra voalohany hanokafana ny sary amin'ity rindranasa ity (amin'ny alàlan'ny Sary na sary).
Avy eo, tsindrio ny bokotra pirinty (anananao eo amin'ny zoro havanana ambony). Hampihetsika ny tontonana fanontam-pirintin'ny solo-sainanao io fa tsy hanonta izany izahay fa hangataka aminao izahay mba hamonjy izay tianay hatao pirinty amin'ny endrika hafa.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy omenao ny Microsoft Print ny PDF ary omeo mba hamonjy azy. Apetrakao ny anaran'ny fisie sy ny extension .pdf dia omenao mba hitahiry.
Ary eny, amin'izao fotoana izao dia tsy manana izany amin'ny Word, fa amin'ny PDF. Saingy io rakitra io, miaraka amin'ny bokotra eo ankavanana, azonao atao ny mangataka azy hanokatra azy amin'ny Microsoft Word ary hisokatra toy ny misy azy izy io. Raha ny marina dia hilaza aminao i Word fa mila manova ny PDF ho rakitra doc izy io. Hoy ianao eny ary, aorian'ny minitra vitsy dia ho vonona ianao.
Mazava ho azy, tsy maintsy jerenao fa marina daholo ny zava-drehetra satria tsy mety diso izany, mety misy lesoka.
Sintomy ireo programa hamonjy JPG amin'ny Word
Raha tianao mametraka programa manokana ho an'ity tanjona ity, Azonao atao koa ny manao azy, satria misy safidy maromaro.
Ny sasany amin'izy ireo dia PDF Element Pro, JPG to Word Converter, JPG to Word ...
Miasa amin'ny fomba mitovy daholo izy rehetra. Ary io dia rehefa apetraka, mila manokatra ny sary amin'izy ireo fotsiny ianao (na apetraho ny làlana misy ny fisie) ary omeo izy hampiova fo amin'ny endrika lahatsoratra vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fomba handehanana amin'ny JPG mankany amin'ny Word